Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Kiruna
Kiruna waxay leedahay wakhti saf oo runtii aad u dheer (qiyaatstii 6 bilood) dhinaca xannaannada carruurta laakiin dhinaca tuulooyinka Svappavaara iyo Vittangi wakhtiga safku wuu ka gaabanyahayqiyaastii 2 toddobaad. Xannaannada carruurtu waxay haysaa tayo macallinimo oo sare lehna hab gaar u ah dadka dalka ku cusub, haddii loo baahdo waxaa shaqaale loo qabtaa si carruurta dalka ku cusub ay u helaan taageerada ay u baahanyihiin. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xannaannada carruurta iyo dugsiyada hoose-dhexe waxaad ka helaysaa degmada boggeeda intarnatka.
Kiruna waxay leedahay qodista macdanta dhulka hoostiisa ee ugu weyn aduunka iyo ganacsi macdanta oo ah degmadan xididkeeda nolosha. Magaaladu waxay iminka ku jirtaa xaalad gaar ah taas oo macdanta birta marinkeedu uu si toos ah u hoos maro magaalada bartamaheeda oo hogaanka degmada ayaa si wadajir ah shirkadda macdanta ula gaartay go'aan in soo saarka macdanta maadaama ay aad muhiim ugu tahay degmada badbaadadeeda in magaalada ay tahay in la raro. In ka badan 100 sanno ayaa macdan soo saaridda birtu ka socotay Kiruna iyadoo aanay si macno leh raad ugu yeelan qaybaha bartamaha magaalada. Sanadkii 2004 ayaa shirkadda macdanta LKAB soo bandhigta saadaasha sida muuqaalka dilaacan u gaari doono meesha iminka ah bartamaha magaalada. Taas ayaa bilow u nootay isbadalka magaalada. Macdan soo saaristan waxay aasaas u tahay nolosha ganacsi ee Kiruna oo sidaas darteed ayay Kiruna diyaar u tahay inay qaybo ah magaalada rarto maadaama macdanta birta marinkeedu uu si toos ah u hoos maro magaalada badhtamaheeda.
Inta lagu jiro sanadaha soo socda huteelo, hoy dhaqan, dhismayaal ganacsi iyo guryo ayaa ka taagmi doona xarunta cusub ee magaalada. Sido kale LKAB ayaa si degdeg ah uu fureeyso sadax god macdan laga soo saaro gudaha Kiruna iyo Svappavaara sanadooyinka soo socdo. Todobo shirkado oo ajnabi ah, shirkado yar ee meesha laga lee yahay iyo shakhsiyaal gaar ah ayaa wado qorsheeynta iyo tijaabinta qodka macdanta gudaha Kiruna.